» फेसबुक च्याटले खोल्यो पोल–गीत डिलेट काण्डको पर्दाफास (भिडियो)
२० जेष्ठ २०७६, सोमबार २३:२४
चन्द्र घलान/मकवानपुर, २० जेठ । बहुचर्चित गीत ‘तिम्रो मायाले बाँधेर राख’ को कभर भर्सन गीत हटाइएको बारेमा अन्ततः गीतका वास्तविक सर्जक गायक श्याम कार्कीले मौनता तोडेका छन् । गीतको कभर भर्सन गाएकी एलिना चौहानको गीत युट्युबबाट डिलिट गरिएपछि गायक कार्कीप्रति नै श्रोताहरुले प्रश्न तेस्र्याएका थिए । एलिनाले दुःखद स्टाटसका साथै गायक कार्कीसँग फेसबुक म्यासेन्जरमा भएको केही च्याट सार्वजनिक गरिएपछि श्रोताहरुले गीत डिलिट हुनुको वास्तविक कारणबारे जिज्ञासा गरेका थिए । एलिनाले फेसबुकमा पोष्ट गरेकी स्टाटसमा गीतको कभर भर्सन गाउन गायक स्वयमले अनुमति दिइएता पनि पछि हटाउन दबाब दिइएको बताइएको थियो । त्यस्तै एलिनाले सार्वजनिक गरेको च्याट स्क्रिनसर्टबाट कभर भर्सन गाउन दिइएको तर भिडियो बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ द्विविधा रहेको चर्चा भएको थियो । तर लामो समय मौन बसेका गायक कार्कीले गीत डिलिट हुनुको कारणबारे प्रष्टा पारेका छन् । उनले आफ्नो अफिसियल फेसबुक पेजमा स्टाटसका साथै एलिनासँग भएको च्याटको स्क्रिन सर्ट सार्वजनिक गरेपछि वास्तविकता खुलेको हो । के लेखेका छन् त गायक कार्कीले फेसबुकमा अनि एलिनासँग उनको के के कुराकानी भएको थियो ? आउनुहोस् यस बारे चर्चा गरौँ । हेरौँ पुरा भिडियो रिपोर्ट–
मे ३ तारिखमा रिलिज गरिएको गीतको कभर भर्सन मे ३१ तारिखमा युट्युबबाट हटाइएको थियो । गीत युट्युबबाट हट्नुअघि एलिनाले एकदिन अगाडि मात्र गीत हट्न सक्ने बारेमा फेसबुकमा स्टाटस लेखेकी थिईन् । स्टाटस आएको भोलिपल्टै गीत डिलिट गरियो । करिब ८ मिलियनको हाराहारिमा भ्यूज पाएको गीतलाई हटाइएपछि एलिनाले यस गीतका ओरिजिनल गायक श्याम कार्कीसँग भएको कुराकानीको स्क्रीन सट समेत फेसबुकमा पोष्ट गरेकी थिईन् । तर अहिले उनले उनको स्टाटस र फेसबुकमा भएको च्याटको स्क्रिन सट दुबै हटाएकी छिन् । उनले फेसबुकमा के लेखेकी थिईन् भन्ने बारेमा हाम्रो यस अघिको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ । अब कुरा गरौँ गायक श्याम कार्कीको स्टाटस र म्यासेञ्जरमा भएको कुराकानीको बारेमा । गायक कार्कीले स्क्रीनसट सार्वजनिक गर्दै स्टाटसमा यस्तो लेखेका छन्– ‘कभर गर्नुस् तर स्रष्टालाई नै कभर गरेर कभर नगर्नुस्’ । सायद यो मेरो ‘तिम्रो मायाले बाँधेर राख’ गीतको विवाद बारेमा यो विषयमा अन्तिम भनाई हुनेछ । धेरै जनाले सोध्नुभएको छ, गीत अनुमति लिएर गर्दा पनि किन डिलिट भयो ? अन्याय भयो । गीतको अनुमति म्यासेञ्जरमा सोध्नुभएको थियो । गीत २०१६ मा रिलिज भएदेखि वेडिङ भिडियो ग्राफरहरुले सोध्नुहुन्थ्यो । पछि गएर कभर गाउने बनाउनेहरुले सोध्न लाग्नुभयो । मेरो एन्सर सबलाई ओके हुन्छ, थियो र छ पनि । त्यो बेलासम्म भिडियोको लोकप्रियता राम्रो भईसकेको थियो । २०१९ को फेब्रुअरीमा भ्यालेन्टाईन्स डेको अवसर पारेर गीत बुष्ट भयो र ६ लाख देखि १.७ मिलियन भ्युज फेब्रुअरी महिनामा पुग्यो । त्यो बेलासम्ममा हप्तामा ५–७ जनाले कभर गाउनका लागि भन्नुहुन्थ्यो । मैले सबैलाई ओके भन्थेँ । टिकटकमा पनि गीत २०–२२ हजार जनाले युज गर्नुभएको रहेछ ।’
श्याम अगाडि लेख्छन्–‘अप्रिलको महिनामा एलिना चौहान बहिनीले सोध्नुभयो । पहिला पनि ईन्ष्टाको फोटोमा प्रब्लम आएर सोधेको भन्नुभयो । मैले को रहेछ यो भनेर हेरेँ, उहाँले पहिला पनि ईन्ष्टाको फोटोको रिप्लाई भर्सन गर्नुभएको रहेछ । भ्वाईस राम्रो लाग्यो, मैले फिमेल भर्सन गाउन अनुरोध गरेँ । तर उहाँले कभर नै गाउँछु भन्नुभयो । मैले ओके भनेँ । गीत रेडी गरेर लिंक शेयर गर्नुभयो, मैले शेयर गरेँ । गीत राम्रो चल्यो, उहाँहरुले मोनेटाईज गर्नुभएको रहेछ, कभर गीत मोनेटाईज गर्न मिल्दैन, आफ्नो खुशीको लागि गर्ने हो । मैले अब तपाईहरुको गीतमा गरेको खर्च उठेको भए मोनेटाईज नगर्नुस्, कभर गीतबाट आमदानी गर्न मिल्दैन भन्दा खेरी म मोनेटाईज अफ गर्न सक्दिन, नाफा नहुने भए किन अरुको गीत अगाडि बढाउने, मैले कसरी कमाउने, तपाईको गीत पुरानो भयो, मैले कभर गरेर तपाईलाई फाईदा भाको छ नभुल्नु होला, भन्नुभयो । त्यो बेलासम्म उहाँले गीतमा गरेको खर्च उठिसकेको र घमण्ड ८० प्रतिशत पुगिसकेको थियो । ल ठिकै छ बहिनी भनी सकि, सानै छ केही दिनको फुरफुर भनेर मैले त्यो कुरा भुलिदिएँ तर विभिन्न अनलाईन मिडियाहरुमा गएर पुरानो गीत मैले गर्दा यति भ्युज थियो अहिले यति भयो भन्ने ? त्यो सम्पूर्ण सर्जकहरुको अपमान हो ।’
श्याम अगाडि लेख्छन्–‘ भगवानको कृपाले मेरो आवाजमा यो गीत आयो, धन्यवाद भन्नुको साटो उल्टै मैले गाएर मेरो भ्वाईसले गीत हिट भयो भन्ने ? एउटा गीत बनाउन धेरै मेहेनत, समय र पैसा खर्च गर्नुपर्छ । र त्यो सब हामीले गरेकाछौँ । गीत सोधेर गरेको छु भन्दैमा जे पनि बोल्दै हिँड्ने ? गीत गाउँदा सोध्ने तर अरुको चरित्र हत्या गर्दा नसोध्ने ? यतिसबै हुँदा पनि मैले किन मेरो गीत डिलिट गर्न नपाउने ? कुनै वस्तुको वा कम्पनीको ब्राण्डएम्बासेडरले कुनै गलत क्रियाकलाप गरेमा एग्रिमेन्ट आफै रद्ध हुन्छ । मैले चाहिँ डिलिट गर्न नपाउने ? हाम्रो गीत हो, चाहे अर्जित सिंहलाई गाउन लगाउँ वा सेलेना गोमेजलाई, केको टाउको दुखाई ? मन परे सुन्नुस् नपरे बाँकी जसले जसरी बुझ्नु छ बुझ्दा हुन्छ । कभर गर्नुस् तर स्रष्टालाई नै कभर गरेर कभर नगर्नुस् ।’
गायक कार्कीको यो स्टाटसमा गीत डिलिट हुनुको कारण एलिनाले बोल्ने कुरामा संयमता नअपनाउनु नै प्रमुख कारण भएको बताइएको छ । उनीसँगको च्याट हेर्दा पनि गीत डिलिट नगरी गायक कार्कीले मोनेटाईज मात्र अफ गर्नु भनेको तर एलिनाले नमानेपछि गीत डिलिट गरिएको प्रष्ट हुन्छ । एलिना र गायक कार्कीका बिचमा के कुरा भएको थियो त ? आउनुहोस् यस बारेमा चर्चा गरौँ । गायक श्याम कार्कीले शेयर गरेको पहिलो च्याट स्क्रिन सर्ट एलिनाले गाएको कभर भर्सन बनाउन सहयोग गरेका एरेञ्जर देव लवारसँगको हो । यस च्याटमा गायक कार्कीले एरेञ्जर देव लवारलाई यस्तो भनेका छन् –‘हेल्लो ब्रो सञ्चै ? तपाईहरुले कभरमा गरेको मेहनत र टाईमको लगानी उठ्यो होला सो अब प्लिज मोनेटाईज अफ गरिदिनुस् । मलाई सिनिएर दाईहरुले एकदम म्यासेज गरिराख्नुभएको छ, कभर गीत भनेर मोनेटाईज गरिरहेको छ, बिजीनेश गरिरहनुभएको छ भनेर । आज तिम्रो गर्यो, भोलि हाम्रो गर्छ भनेर र त्यसबाट वास्तविक श्रष्टाहरु मरिरहेका छन् । त्यसैले मोनेटाईज नगर्नुस्, ‘तिम्रो मायाले बाँधेर राख–श्याम कार्की कभर एलिना चौहान’ राख्नुस् । फिमेल भर्सन हटाईदिनुस् । ‘तिम्रो मायाले बाँधेर राख–श्याम कार्की कभर बाई एलिना चौहान’ यो टाईटलमा राख्नुहोला । यो म्यासेज फोन गरेर वा म्यासेजमा भनिदेउ है, मेरो टिम र सिनियर दाईहरु रिसाईरहेको छ मसँग । श्यामको म्यासेजमा देवले रिप्लाई गर्दै लेखेका छन् –‘ मानेटाईज गर्न पाईदैन र ?, हजुरको गीतलाई पनि राम्रो भाको नि होईन र ?’
गायक कार्कीले शेयर गरेको दोस्रो स्क्रिन सर्टमा एलिना र उनीबिचको कुराकानी समावेश छ । त्यस म्यासेजमा एलिनाले यस्तो लेखेकी छिन् –‘मलाई पनि हुन्छ त्यो, सो, मैले केही नभनेको हो । त्यस्तो नराम्रो नसोच्नुस्, मैले हजुरलाई सोधेर गरेको थिएँ । त्यसपछि एलिनाले थम्बस अप पठाउनुका साथै गायक कार्कीलाई कल गरेका छन् । कल मिस्ड भएपछि एलिनाले ‘मलाई कल गर्नुसु हस’ भनेर लेखेकी छिन् । एलिनाले अगाडि लेखेकी छिन्–‘सरी यो गीतमा चाहिँ मोनेटाईज अफ गर्न सक्दिन । आफुलाई केही फाईदा हुन्न भने किन अरु गीत अगाडि बढाउने ? मैले हजुरलाई यस्तै हुन्छ भनेर सोधेर गरेको हो ।’ त्यसपछि श्यामले यस्तो लेखेका छन् –‘ देव जीसँग कुरा भयो, बहिनी, कभरको अर्थ कभर नै हो, मलाई पनि धेरै प्रेसर तनाव हुन्छ, मेरो पनि टिम छ, मेरो पनि सिनियरहरु हुन्छ, मैले पनि जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ, कभर कसैले पनि मोनेटाईज गर्दैन, कभर आफ्नो खुशीको लागि गर्ने हो, बिजनेशका लागि होईन ।’ ‘तिमी हरेक ठाउँको रुल्स हेर, मैले नराम्रो केही भनेको छु जस्तो लाग्दैन, तिमीलाई एउटा बहिनी मानेर भनेको हो, तिम्रो राम्रो होस्, तिम्रो राम्रो हुन्छ, राम्रा दिनहरु आउन बाँकी छ तिम्रो ।’
श्याम अझै अगाडि लेख्छन्–‘म गीतसँगीतमा भर पर्ने आर्टिस्ट होईन, म गीतबाट खुशी हुन्छु, पैसा कमाउने धेरै आईडियाहरु छ, धेरै बाटोहरु छन् मेरा लागि, जस्ट पछिपछिको आर्टिस्ट, सिनियरहरु नमरुन् त्यत्ति हो । गुड डे, र तिमीलाई मोनेटाईज नगरी अरुको प्रोपर्टी, अरु गीत अगाडि बढाउनु छैन भने तिमी भिडियो डिलिट गर्न सक्छौ ।’ श्यामको जवाफमा एलिनाले लेखेकी छिन्–‘थ्यांक्स, हजुरले पनि लाष्टमा यस्तै भन्नुभयो, म चाहिँ कसरी कमाउनु ? सबैले मोनेटाईज गर्छ, स्वप्न, त्रिसलाहरुले गरेको छैन र ? ठिकैछ देव दाईसँग कुरा गर्नु, डिलेट गर्छु भन्नुभयो भने ठिकै छ डिलिट होस्, पछि मिडियाबाट प्रश्न आयो भने म यही भन्छु । हजुरको गीतलाई धेरै फाईदा भएको छ मेरो कभरले, यति कुरा चाहिँ नभुल्नुहोला । सार्वजनिक भएको अर्को स्क्रिनसटमा एलिनाले अगाडि लेखेकी छिन्–‘यत्रो पुरानो गीतले न्याय पायो, खुशी हुन छोडेर….मोनेटाईजमा ल्याङ गर्नुहुन्छ यस्तो सिंगर भएर । तपाईहरुको भिडियो पुरै कपि गरेर पनि त अपलोड गरेको छैन । तपाईको गीत भर्खरै अपलोड भएको भए, म मान्थेँ, असर पर्छ हजुरको बिजनेशमा, जति कमाउनु भइसकेको थियो नि त फेरि किन यसमा त्यस्तो भन्नुहुन्छ ?
एलिनालाई जवाफ दिँदै श्यामले देखेका छन्–‘ओके, मोनेटाईज हट्दैन भने डिलिट गर्देऊ, कुन मिडियाले के प्रश्न गर्छ म पनि हेरुँला, कभर भनेको कमाउनका लागि गर्ने होईन, कभरले नाम कमाउने हो, पैसा होईन, तिमी राम्रो गाउँछौ, भ्वाईस राम्रो छ जसरी पनि कमाउछौ, कभर गीत मोनेटाईज गर्न मिल्दैन, यो बिजनेश होईन, बहिनी अनि एउटा कुरा नभुल कि मेरो गीतले गर्दा तिम्रो राम्रो भएको छ, तिमीले गर्दा मेरो होईन । गीत भनेको गायकको मात्र हुँदैन, त्यसमा धेरै कुरा हुन्छ, तिमीलाई बढि नै थाहै होला । अनि गीत कसरी पुरानो हुन्छ ? नारायण गोपाल, अरुण थापाको गीत सुन्दैनौँ तिमी ? पुरा उपकार गरेको महशुस नगराउन मलाई । मैले यत्ति मात्र भनेकी मोनेटाईज हटाउ, मैले अरु केही भनेको छु जस्तो त लाग्दैन । त्यसपछि एलिनाले भनेकी छिन्–‘भयो दाई, तपाईको गीत भन्दा अगाडि नै मैले ईन्ष्टाको फोटो गाएको थिएँ ।’ त्यसपछ श्यामले ‘हो तिम्रो आवाजमा जादु छ, म मान्छु’ भनेका छन् । एलिनाले ‘मैले डिलिट गर्दा मान्छेले अर्कै सोच्छन्’ भनेकी छिन् । श्यामले उनीलाई जवाफ दिँदै ‘मात्र मोनेटाईज हटाउ, गीत हटाउनु पर्दैन’ भनेका छन् । त्यसपछि एलिनाले ‘मैले आफ्नो लागि थोरै, सहयोग होला भनेर गरेको हो, बिजनेश होईन ।’ त्यसपछि एलिनाले ‘पुग्यो मलाई, मलाई आवश्यक छैन दाई’ भनेर जवाफ दिएकी छिन् ।
त्यसपछि गायक कार्कीले पुनः मोनेटाईज हटाउ भनेका छन् । एलिनाले ‘धन्यवाद, म अफ गर्न लगाउँछु, कभर गर्न छोड्दिन्छु अब ।’ भनेकी छिन् । त्यसको जवाफमा श्यामले ‘धन्यवाद’ भनेका छन् । एलिनाले ‘मैले हजुरलाई यही हुन्छ भनेर अनुमति मागेको हो ।’ भनेर भनेकी छिन् । त्यसपछि श्यामले ‘अनुमतिमा कभर हुन्छ, कभरमा मोनेटाईज हुँदैन’ भनेका छन् ।
श्याम र एलिनाबिच भएको यो कुराकानीलाई विचार गर्दा एलिनालाई कभर गीत हटाउनुपर्ने बाध्यता नभएको प्रष्ट हुन्छ । उनलाई गायक कार्की मोनेटाईज मात्र नगर भनेको देखिन्छ । मोनेटाईज गर्दा आफुसहित पुरै टिमलाई अप्ठ्यारो परेपछि उनले मोनेटाईज नगर्न आग्रह गर्दै एलिनासँग च्याट गरेको देखिएको छ । तर एलिनाले गीत मोनेटाईज अफ गर्नुभन्दा डिलिट गर्न उचित ठानेको जस्तो कुराकानीमा देखिन्छ । साथै कसले कसलाई सहयोग गर्यो भन्ने कुरामा असमझदारी भएको समेत देखिन्छ । एलिना र श्यामबिचको कभर विवादले कभर गीत गाउँदा आउनसक्ने धेरै समस्याहरुलाई उजागर गरेको छ । कभर गीत गाएर हामी आफ्नो नाम त बनाउन सक्छौँ तर अरुको सम्पत्ति प्रयोग गरेर पैसा कमाउनेतिर चाहिँ लाग्नुहुँदैन भनेर गायक कार्कीको टिमले प्रष्ट पारेका छन् ।
यो गीतको ओरिजिनल भर्सन सन् २०१६ को मे महिनामा गायक श्याम कार्कीले आफ्नै युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । यस गीतको शब्द, सँगीत र गायकको आवाज निकै नै कर्णप्रिय छ । गीतमा रवि मल्लको शब्द र विराट कदरियाको संगीत रहेको छ । अलमोडा राना उप्रेतीको संगीत संयोजन रहेको गीतलाई बिजु कर्मचार्यले मिक्सिङ गरेका छन् । गीतलाई केही समय अघि मात्र चर्चित डान्सर तेरिया मगरले समेत कभर गरेकी थिईन् । त्यस्तै यसै गीतको फिमेल भर्सन भने भर्खरे सार्वजनिक भएको छ । फिमेल भर्सनलाई नेपाल आईडलको सिजन २ मा फाईनलसम्म पुग्न सफल चर्चित गायिका अस्मिता अधिकारीले आवाज दिएकी छिन् ।